Uyaqhubeka nokubeka amarekhodi amasha uRonaldo - Impempe
Uyaqhubeka nokubeka amarekhodi amasha uRonaldo
UCristiano Ronaldo usengumshayi wamagoli ohamba phambili emlandweni webhola lase-Europe kulandela ukuvalela phakathi amagoli amabili ngesikhathi iPortugal ihlula iHungary ngo 3-0 ngoLwesibili ebusuku. Lo mdlalo we-Euro 2020 besusenhlokodolobha yaseHungary, eBudapest.
URonaldo uye kulo mqhudelwano elingana ngamagoli nengwazi yakudala yaseFrance uMichael Platini. Kodwa iphenathi ayishaye ngomzuzu ka-86 ebiqinisekisa ukuthi iPortugal iwathatha ephelele amaphuzu kulo mdlalo wayo wokuvula kwi-Euro 2020, yenze wabeka irekhodi elisha lamagoli e-Europe.
Lo mdlali ogojima kwiJuventus yase-Italy, usedlale imidlalo engu-22 ye-European Championship. UPlatini yena wadlala imidlalo emihlanu kuphela ye-Euro ngesikhathi ebeka irekhodi lamagoli ayisishiyagalombili ngo-1984.
Kuyamangaza nokho ukuthi leli rekhodi bese lihlale isikhathi eside kangaka libe libukeka lilula ukuliphula. URonaldo uphinde waba ngumdlali wokuqala ukudlala kwi-Euro amahlandla amahlanu. Ungowokuqala futhi ukukora emiqhudelwaneni emihlanu ye-Euro. Njengamanje ushoda ngamagoli amathathu ukuthi afice irekhodi lika-Ali Daei lamagoli amaningi ebholeni lomhlaba.
URonaldo uphinde washaya elinye igoli esikhathini esengeziwe kulo mdlalo. Cishe iHungary beyizibona izohlomula ngephuzu ngemuva kwalo mdlalo njengoba ize yangenelwa yigoli sekusele imizuzu eyisithupha nje.
Umdlalo bewubukeka uzophela zibambene kwaze kwaba uRaphael Guiererro uvalela Phakathi igoli ngomzuzu ka-84. URonaldo ube eselandela naye ngawakhe amabili ngasekupheleni komdlalo.
IPortugal izobuyela enkundleni ngomgqobelo njengoba inomdlalo ongelula neze. Izobhekana neGermany e-Allianz Arena, eMunich. IGermany iphefumula ngenxeba futhi izobe ibheke ukujika izinto njengoba iwuqale kabi lo mqhudelwano ishaywa iFrance.
Previous Previous post: Usethembe iVAR eMorocco uParker weChiefs
Next Next post: UHamlett akafuni ukukhuluma ngokwamxabanisa nomsubathi wakhe ovelele